Qarax Loo Adeegsaday Gaari Oo Goordhaw ka dhacay Muqdisho Iyo Qasaare Ka dhashay.
Duhurnimadii maanta qarax aad u xoogan ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan kasoo horjeedka Hotelka central maqaayad lagu Magacaabo Banoda oo ay wax ka cunaan xildhibaanada Iyo Saraakiisha DF-ka ah.
Wararka ayaa sheegaya in weerarka qaraxa ah loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo la dhigay aga gaarka maqaayadda sida warka aan ku heleyno,weerarka ayaa bur buriyay goobta lala eegtay.
Inta la hubo ku dhawaad 20 qof ayaa ku dhintay goobta qaraxa uu ka dhacay halka sidoo kale ay jiraan dhaawacyo badan oo la geeyay isbitaalada Muqdisho qaarkood.
waxaa lasoo sheegayaa in tiro saraakiil ah ay dhimasho Iyo dhaawac ku noqdeen weerarkaas ka dhacay aga gaarka Hotelka central ee magaalada Muqdisho waxaana qaraxaas uu yimid maalmahan kooxda xassan Sheeq ay ku mashquulsanaayeen sugidda ammaanka caasimadda Somaliya.
Ma jirto wax war ah oo Mujaahidiinta ay kasoo saareen qasaaraha ka dhashay qaraxa iyo cidda ay la beegsadeen